Kooxda Manchester City oo Barcelona iyo Manchester United ku garaaci rabto Daafac ee in mudo ah baadi goob ugu jireyn. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kooxda Manchester City oo Barcelona iyo Manchester United ku garaaci rabto Daafac ee in mudo ah baadi goob ugu jireyn.
Kooxda Manchester City oo Barcelona iyo Manchester United ku garaaci rabto Daafac ee in mudo ah baadi goob ugu jireyn.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-06-16 7:14 AM Kooxda Manchester City aya ku dhow in ay helaan adeega daafaca kooxda Everton ee john Stones marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagan si ay kooxda ugu xoojiyaan xilli ciyaareedka dambe.
Wararka ayaa sheegaya in maamulka Manchester City ay ku dhowyihiin in ay heshiish la gaadhaan xiddigan reer England si ay adeegiisa u helaan xilli ciyaareedka dambe.
Stones ayaa ka mid ah xiddigaha ugu fiican kooxda Everton ee isku diyaarinaya in ay xulka qarankooda kala qayb galaan Euro 2016.
Xiddigan ayaa aad loola xiriirinayay in uu ka tagi doono kooxda Everton labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay iyada oo haatan u muuqata in uu xiddigan ku biiri doono kooxda Manchester city.
Kooxaha manchester United,Barcelona iyo chelsea ayaa aad loola xiriirinayay in uu u dhaqaaqi doono marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagan laakiin kooxda Manchester City ayaa uga horaysa saxiixa laacibkan wakhtigan la joogo